Page 429 – Baganthar
လူတိုင်း ကြိုက်ကြတဲ့ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ (၈ ပွဲစာ) ပြုလုပ်နည်း
Bagan Thar Aug 28
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းမေးထားတဲ့သူများပေမယ့် အခုမှရေးဖြစ်တော့တယ်။ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲကတော့ လုပ်ရတာလွယ်ပြီး စားကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ အိစံရဲ့ သားသား အရမ်းကြိုက်တော့ ခဏခဏလုပ်ကျွေးဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ၁။ ကြက်သား အသားချည်း- ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင် ၂။ ခေါက်ဆွဲ – ၇၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၃ ပေါင် ၃။ ပဲငံပြာရည် – ထမင်းစားဇွန်း ...
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်များနှင့် ထိုဘုရားရှင်တို့ ပွင့်တော်မူရာ ဗောဓိပင် များကို လည်းကောင်း၊ ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်သည် တဏှင်္ကရာ ၊ မေဓင်္ကရာ၊ သရဏင်္ကရာဘုရားများ ထံမှ အနိယတဗျာဒိတ်တော် ခံယူခဲ့ပုံများနှင့် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားမှ အစပြု၍ ကဿပမြတ်စွာဘုရားတိုင်အောင် နိယတ ဗျာဒိတ်တော် ခံယူပုံများကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ၁။ တဏှင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ရာ ဗောဓိ-စရည်းပင် သာရမဏ္ဍကမ္ဘာဝယ် ပုပ္ပ၀တီပြည်၌ ခမည်းတော် နန္ဒ၊ မယ်တော် သုနန္ဒလတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူပြီး၊ ဆင်ယာဉ်နှင့် တောထွက်တော်မူကာ ...
တစ်ပါးသူမျက်ရည်အတွက် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှကျပေးသူ (ရှားမှ ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး)
ရှားမှ ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး(၀ိဇ္ဇာ ထွက်ရပ်ပေါက် မဟုတ်ပါ) ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားကို လက်မခံနိုင်သူများ၊မလိုမုန်းထား စိတ်ရှိနေသူများကိုယ်နဲ့အမြင် မတူညီသူများရှိနိုင်တာရယ်၊ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှု၊မုဒိတာမပွားနိုင်သူများရှိနေရင် သူတို့ကို အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်စေမလားလို့ တွေးမိတော့ ရေးမဲ့လက်တွန့်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့သူကို ထုတ်ဖော်ချီးမြှောက်တာဟာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့လျော်ညီတာမို့ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုထင်နေပါစေ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလအမြင်လေးကိုရေးချမိပါတယ်။ ကျွန်တော် တာချီလိတ်ကို ခြေချမိချိန်၊လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်တာကာလမှာ တာချီလိတ်မြို့ရဲ့ မြို့မိမြို့ဖတွေ၊ဌာနဆိုင်ရာ၊လုပ်ငန်းအသီးသီးက လူကြီးတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းအကျွမ်းတဝင်ရှိလာသလို၊သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိရှိလာရတာတွေလည်းများလာပါတယ်။ ...
လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်က ကောလာဟလ၊ သတင်းမှားတွေကို ဘယ်လို သတိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြမလဲ
သတင်းမှား၊ သတင်းတုတွေ၊ မှန်ကန်မှု မရှိတဲ့ ကောလာဟလသတင်းတွေကတော့ ယနေ့ကာလ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူတစ်ချို့ဟာဆိုရင်လည်း ဒီလို မမှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တကယ် အဟုတ်အမှန်ထင်ပြီး ထပ်ဆင့် ဝေမျှကြရင်းနဲ့ ဒါတွေကို ပို ပြန့်နှံ့သွားစေနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းမှား၊ သတင်းတုတွေတွေကို ဘယ်လို ဂရုစိုက် ရှောင်ကြဉ်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုထားပါတယ်။ ၁. Publisher ရဲ့ ...
တချိန်က ကမ္ဘာကျော် ဘာလင်တံတိုင်းကြီးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Bagan Thar Aug 27
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက် နာဇီဂျာမဏီရဲ့ နယ်မြေများကို အမေရိကန် ၊ အင်္ဂလန် ၊ ပြင်သစ် နှင့် ဆိုဗီယက်တို့က အပိုင်း ၄ပိုင်း ခွဲခြမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုဗီယက်က အရှေ့ဂျာမဏီကို ထူထောင်ကာ ပြင်သစ် ၊ အမေရိကန် နှင့် အင်္ဂလိပ်တို့က အနောက်ဂျာမဏီကိုထူထောင်ပေးပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲ ကာလကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၂ခုနှစ်အထိ အရှေ့အနောက် ဂျာမဏီကို လွယ်ကူစွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ခုနှစ် ဧပြီ ၁တွင်မူ သံဆူးကြိုးဖြင့်ကာရံကာ ဖြတ်သန်းခွင့်များကို ...
ကျွန်ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် လူသားတစ်ယောက်ကို အနေအစားဆင်းရဲ စွာထားကာ ခွန်အားကုန် ချွေးသံရွှဲရွှဲ ခိုင်းစေပြီး တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပမာ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခံကြရသည့်အပြင် အနိမ့်ကျအခက်ခဲဆုံး အလုပ်များ လုပ်ကိုင် ကြရသည် ဟု အတော်များများ နားလည်ကြ ပါလိမ့်မည်။ ပုဂံမြေပေါ်၌ ဘုရားစေတီပေါင်း များစွာ တည်ရှိလေရာ အနီးစပ်ဆုံး ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ အရ ကျွန်(၃) ရွာအား လှူဒါန်း သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိလေသဖြင့် ကျွန်သည် မပါမဖြစ်သော လူတန်းစား တစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်ကို ...
ဝက်အူချောင်း (သို့) ကြက်အူချောင်း ပြုလုပ်နည်း
အိစံ လုပ်တဲ့ ဝက်အူချောင်းလုပ်နည်းက ဆိတ်အူနဲ့ မလုပ်ပဲ ပလပ်စတစ်နဲ့ ပတ်တဲ့ နည်းပါ။ တကယ်လို့ ဆိတ်အူနဲ့ လုပ်ချင်လဲရပါတယ်။ ၀က်အူချောင်းကို နီနီလေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ ယမ်းစိမ်းထည့်ရင်ထည့် မထည့်ရင်လဲ အနီရောင်ဆိုးဆေးထည့်ရင်တော့နီပါတယ်။ အိစံကတော့ ဘာမှမထည့်ထားလို့ သိပ်မနီပါဘူး။ အိမ်မှာပဲလွယ်ကူအောင်လုပ်လို့ ရတဲ့ နည်းကိုရွေးပြီး စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်သွားလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ၀က်အူချောင်းကို ယမ်းစိမ်းတွေ လဲမပါပဲ သန့် သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်စားရအောင်နော်။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ၁။ အဆီပါသော ...
ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းနှင့် ဘော်ဒါဖွဲ့ထားသည့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း
ဒုစရိုက်ဂိုဏ်း…နှင့်…ဘော်ဒါဖွဲ့ထားသည့်…အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း . ဒီဆောင်းပါးကို…ရေးချင်နေတာ..ကြာလှပြီ။သိမ်းထားတဲ့..နာရေးကြော်ငြာမရှာအားသေး၍..ကြန့်ကြာ နေရသည်။ ၁၉၈၃မှ…၂၀၀၀ပြည့်နှစ်အထိ..အလုံမြို့နယ်မှာ..မိမိနေခဲ့ပါသည်။တစ်နေ့တော့..ညနေထမင်းစားအပြီးမှာ-လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။အလုံမြို့နယ်..ဘောလုံးကွင်းနားရောက်တော့..ကွင်းထဲမှာ..မီးရောင်တွေကို..မြင် နေရသည်။ဆိုင်းသံ-ဗုံသံလည်း..ခပ်သဲ့သဲ့ကြားနေရတော့..အနားထိသွား၍..ကြည့်မိသည်။ကွင်းအ၀င်ဝမှာ တော့..မြန်မာ့အားကစား..ကမ္ဘာကို..လွှမ်းစေရမည်..ဆိုသော..ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို..ထင်းကနဲတွေ့ရ၍..စိတ်ထဲမှ..ကြိတ်၍..ပြုံးမိသေးသည်။ဆောင်ပုဒ်တွေ..ထုတ်တိုင်း..ဆိုင်းဘုတ်ဖိုးတွေ..ကုန်သည်မှာ..အစဉ်အလာပင် ဖြစ်တော့သည်။ . ကွင်းထဲမှာတော့..ဇာတ်ရုံတစ်ရုံကို..ဖြစ်ကတတ်ဆန်းထိုးထားသည်။မိုးကာလမဟုတ်တော့..အမိုးကိုပင်-ပြည့်အောင်မမိုး။ ကျူဖျာလေးတွေကို…ကြိုးတိုးကြဲတဲ..နှင့်..ဟိုတစ်စသည်တစ်စ..မိုးသည်..ဆိုယုံမျှ..ဖြန့်ကျက်ထားပါသည်။ဇာတ်ရုံအ၀တွင်….ရုံပေါက်စောင့်..မရှိ။ဇာတ်အဖွဲ့နာမည်ကလည်း..မိမိတစ်ခါမှာ..မကြားဘူးသော..နာမည်။..စပ်စပ်စုစုနဲ့..အထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့..ပွဲက–ကနေပါပြီ။ကြည့်နေသူတွေက..ငါးဆယ်ပင်ပြည့်မည်မထင်။ . ဒါနဲ့..ပြန်ထွက်လာပြီး..ပွဲဈေးခင်းဘက်..လျှောက်မိပြန်သည်။ထိုနေရာတွင်မတော့..လူတွေ..ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေပါသည်။..စည်ကားသည်ဆိုသော်လည်း..အထည်ဆိုင်-ကုန်စုံဆိုင်-ကုန်မာဆိုင်-လူသုံးပစ္စည်းဆိုင်…ဘာဆိုင်မှမရှိပါ။လောင်းကစားဝိုင်းကြီးတွေက..ပေါ်ပေါ်တင်တင်..တသီတတန်း..ခန်းခန်းနားနားနဲ့..အရမ်း သားနားနေကြသည်။လောင်းကစားဝါသနာပါသူမဟုတ်တော့..ဘာကစားနည်းတွေမှန်းလည်း-မသိပါ။၃၆-ကောင်ဆိုတာကိုတော့..သိပါသည်။တချို့ဝိုင်းတွေမှာက..ကောင်မလေးတွေက..အပျံစား။လက်ဝှေ့ပွဲမှာ. Round No.ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး…လက်ဝှေ့စင်ကို..ပတ်ချာလှည်၍..ပြနေသော..ယခုခေတ်မိန်းခလေးတွေ အလား။ . ရန်ကုန်လို…မြို့တော်ကြီးမှာ….အကာအကွယ်ကင်းတဲ့..ဘောလုံးကွင်းထဲတွင်…ထိန်ထိန်ညီးတွေတဲ့..မီး ရောင်တွေနဲ့..စည်ကားသိုက်မြိုက်နေတဲ့..ဒီလောင်းကစားဝိုင်းကြီးက..ချောင်ကြိုချောင်ကြားမှမဟုတ်ပါ။ ဘတ်စ်ကားပြေးသည့်..မော်တော်ကားလမ်းမကြီး၏နံဘေးတွင်..ဖြစ်ပါသည်။အာဏာပိုင်တွေ..ပြည်သူ့ရဲတွေ..မသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။..ထိုမြင်ကွင်းကြောင့်..မိမိရင်ထဲမှာ..မအီမသာခံစားရင်းနဲ့..လာလမ်းအတိုင်း..ပြန်လျှောက်ပြီး..ဘော်ဒါတွေနဲ့..ဆုံနေကြ..အလုံ-ညဈေးတန်းလမ်းကို..တလှမ်းခြင်း..လှမ်းမိပါတော့သည်။ . ညဈေးတန်းမှ..ထိုင်နေကြ..လဘက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့..လူစုံနေပြီ။..ကောင်းလေစွ။..မိမိမှာမေးစရာ-မေးခွန်းတွေ..တသီတတန်းကြီးပါလာသည်။အလုံမှာနေတာ..၁၅နှစ်ကျော်နေသော်လည်း..စေ့စေ့ငှငှတော့သိသည်မဟုတ်။..ဘော်ဘော်တွေက..ဌာနေများဖြစ်သည်။ဒီမှာမွေး၍..ဒီမှာဘဲ..ကြီးပြင်းကြသူတွေ-အသက်တွေကလည်း..၅၀ကျော်ကုန်ကြပြီ။ဒါနဲ့..တွေ့ခဲတဲ့..မြင်ကွင်းကို..သတင်းပေးပြီး.. တအံ့တသြနဲ့..အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး. နိဒါန်းဖွင့်တော့..သူတို့က..အံ့သြဟန်မပြ။ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်..ဟုသာ..ယူဆနေပုံရပါသည်။ . သူတို့ပြောပြတော့မှ…မိမိက..အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရတော့သည်။အတွေးထဲမတော့… . နိုင်ငံတော်အတွက်…. အနာဂတ်အတွက်… မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်….မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည်…အလုံးစုံပျက်သုန်း၍..ဦးတည်သည့်..လားရာ က..မှားနေပြီလော..ဟု..သံသယအတွေးတွေ..၀င်လာပြန်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်..ပတ်သက်၍..သူတို့စကားအရ..ဆိုပါရင်…. . ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ
လက်ရှိအချိန် မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ သန်း ၇၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး နောင်လာမယ့် နှစ် (၃၀) အကြာမှာ သန်း ကိုးထောင်ကျော် ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အများဆုံး (၁၀) နိုင်ငံစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကပါနေကျ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့ကပဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ လူဦးရေ အများဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပေမယ့် ...
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး Hello ဆရာဝန်က ဘာတွေပေါက်ကရ ရေးမှာလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက မာဆတ်ဆိုတဲ့ စာလုံးမြင်တာနဲ့ မကောင်းတဲ့အရာကြီးတခုလို ရုတ်တရက် မြင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုဆောင်းပါးလေးမှာတော့ အနှိပ်ခံခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ (၁) ကိုယ်စိတ်ဖြေလျှော့မှု ရှိစေခြင်း သင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာမှာ တင်းကြပ်မှု၊ဖိစီးမှုတွေရှိနေပြီ၊နွမ်းနယ်နေပြီဆိုရင် ကော်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတမျိုးကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းထွက်ရှိလာခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊အစာမကြေခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို ဦးတည်လာစေပါတယ်။အနှိပ်ခံခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကော်တီဇောဟော်မုန်းပမာဏကို လျှော့ချပေးတယ်လို့ လေ့လာသုတေသနပြုချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့် ...